​Mareykanka oo cunaqabateyn ku soo rogay Venezuela
Madaxweynaha Venezuela, Nicolas Maduro, ayaa gaashaanka u daruuray cunaqabateynta uu Mareykanku ku soo rogay saddex iyo toban qof oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa dhanka siyaasadda iyo milateriga ah.
Maduro ayaa cunaqabateynta ku tilmaamay inay tahay mid sharci-darro ah, ceeb ah iyo weliba aanan horay loo arag.
Waxa uuna wacad ku maray inuu qaban doono doorashada oo uusan dhag jalaq u siinayn cadaadiska caalamiga ah ee saaran.
Cunaqabateynta Mareykanka ayaa waxaa lagu xanibay hantida Mareykanka ka taal dadka ku jira liiskaasi, iyo sidoo kale in hay'adaha Mareykanka aanay wax ganacsi ah la sameyn karin shakhsiyaadkaasi.
Dadka ku soo baxay liiskaasi waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo abaanduulaha milateriga dalkaasi Venezuela.
Mareykanka ayaa ugu baaqay Mr Maduro inuu joojiyo codbixinta uu muranka ka dhashay ee la qabanayo maalinta Axadda ah taasi oo lagu dooranayo baarlamaan leh awood dib loogu qori karo dastuurka, taas oo uu Mareykanku ugu yeeray inay halis ku tahay dimuqraadiyadda.
Todobaadkii la soo dhaafay, ayuu Madaxweyne Donald Trump, waxa uu wacad ku maray inuu Venezuela ku soo rogi doono cunaqabateyn dhanka dhaqaalaha ah oo xooggan haddii uu Madaxweyne Maduro qabto doorashada lagu wado inay dhacdo maalinta Axadda ah.
​X. Fiqi "Hadalkii Sh. Baaruud wuxuu halis galin karaan noloshada Xildhibaanada"
Soomaliya 11.07.2017. 23:18
MUQDISHU, Somalia- Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi, ayaa walaac ka muujiyay hadal dhawaan uu goob Xaflad ah ka sheegay Sheekh Nuur Baaruud oo kamid ah Culimada Somaliyeed.
Hadalkaas oo u dhacayay in Xildhibaanada Barlamanka Somalia ee wada mooshinka ay ka ...
​Puntland: Weerar ka dhacay gobolka Bari
Puntland 24.09.2017. 21:55
​Puntland iyo Galmudug oo shir ku leh Koonfur Galkacyo
Puntland 06.09.2017. 13:14
​Mas'uuliyiintii Degmada Balad Xaawo oo lagu xiray Dooloow
Soomaliya 26.07.2017. 15:25